अध्यक्ष ओलीसँग किन बिच्किए बामदेव ? भूमिकाविहीन बामदेवको रहर कि बाध्यता ? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
काठमाडौँ । पाँच वर्षे स्थायी सरकारको नेतृत्व लिएर खुरुखुरु काम गर्ने बेला सरकार पार्टीको आन्तरिक किचलोमा फस्ने देखिएको छ। एकताको घोषणा गरे देखि नै अनेकौ शंका आशंकाका बीच यँहासम्मको यात्रा तय गरेको नेकपाको हाल जारी स्थायी समितिको बैठकमा देखिएको विवादले सरकारको काम कारवाहीलाई नै असर पुग्ने देखिएको छ।
राजनीतिमा पलाएको प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका एक अध्यक्ष केपी ओलीको महत्वाकांक्षालाई पार्टीभित्रैबाट रोक्ने गरी अर्का वरिष्ठ नेता वामदेव गौतमले फरक मत सहितको राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेपछि पार्टी दुई ध्रुवमा विभाजित हुने देखिएको छ।
शनिबारदेखि जारी स्थायी कमिटी बैठकमा दुई अध्यक्षको प्रतिवेदनसँगै वामदेवले वैयक्तिक रुपमा शक्तिशाली अध्यक्ष ओलीलाई रोक्न आफ्नै प्रतिवेदन पेस गरेपछि नेकपामा ओली महत्वाकांक्षामाथि चुनौती थपिएको हो ।
के हो बामदेवको बाध्यता ?
पटक–पटक गरेका प्रतिबद्धता अध्यक्ष ओलीले पालना नगरेको भन्दै बामदेव अहिले उनको विरोधमा अगाडी आएका हुन् । २०७० सालको संविधानसभा चुनावपछि गौतम–ओली सँगै हिँडिरहेका थिए । तर योबीचमा ओलीले बामदेवसँगका सहमति पालना नगरेको गौतमको आरोप रहेको छ।
वर्षौंदेखि नेतृत्वका आकांक्षी रहेका ओलीले तत्कालीन अवस्थामा पार्टीभित्र निर्णायक रहेका बामदेवसँग सहकार्य नगरी संसदीय दलको नेता नजित्ने देखेपछि २०७० मा सहकार्यको हात अघि बढाएका थिए ।
त्यसबेला ओलीले आफू पहिले संसदीय दलको नेता बन्ने र महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बनेपछि बामदेवलाई त्यो पद सुम्पिने प्रतिबद्धता गरेका बताइन्छ । त्यसैका आधारमा बामदेवको समर्थनमा पहिले ओलीले संसदीय दलको नेता जिते र त्यसपछि भएको महाधिवेशनमा बामदेवले ओलीलाई अध्यक्ष बनाउन साथ दिए । किनकि अध्यक्ष भएपछि संसदीय दलको नेता पाउँछु भन्ने बामदेवको आशा थियो ।
ओलीले अध्यक्ष बनेपछि गौतमलाई संसदीय दलको नेता बनाउने प्रतिबद्धता पनि पूरा नगरेको बामदेव निकट नेताहरुको आरोप रहेको छ । त्यसपछि प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि ओलीले संसदीय दलको नेता, अध्यक्षसहित तीनवटै पद लिए । २०७४ को चुनावपछि पनि ओली संसदीय दलको नेता, अध्यक्षसहित प्रधानमन्त्री भए ।
बामदेवले चुनावमा नमिठो हारबेहोरेपछि उनले सुरुमा एउटा शक्तिशाली विकास प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने र त्यसको नेतृत्व आफूलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । उक्त प्रस्तावमा सुरुमा ओलीले समर्थन जनाए पनि प्रधानमन्त्री बनेपछि प्राधिकरण बनाउनेतर्फ चासो दिएनन् ।
त्यसपछि प्रतिनिधिसभाका एक सदस्यलाई राजीनामा गराएर सांसद बन्ने बाटोतर्फ लागेका बामदेवलाई सुरुमा दुई अध्यक्षहरूले साथ दिए तर काठमाडौं ७ का सांसद रामवीर मानन्धर बामदेवका लागि राजीनामा दिन तयार भएपछि ओली पछि हटेको उनको बुझाई रहेको छ । यसरी पटक–पटकका प्रतिबद्धता पूरा नगरेको र आफूलाई भूमिकाविहीन बनाएको बामदेवको आरोप रहेको छ ।